BAALALROGIDDA BIDHAAMIYE W/Q: Xasan Cabdulle Calasow "Shiribmaal"
Wednesday November 07, 2018 - 23:14:36 in Wararka by Mogadishu Times
BAALALROGIDDA BIDHAAMIYE W/Q: Xasan Cabdulle Calasow "Shiribmaal" Bidhaamiye waa dhigane ka faalloonaya kobcinta afka Hooyo. Mar haddii lagu yiri: "HOOYO" Waad garatay inay tahay halka laga soo askunmo ee billaaw u ah jiraalka.
BAALALROGIDDA BIDHAAMIYE W/Q: Xasan Cabdulle Calasow "Shiribmaal" Bidhaamiye waa dhigane ka faalloonaya kobcinta afka Hooyo. Mar haddii lagu yiri: "HOOYO" Waad garatay inay tahay halka laga soo askunmo ee billaaw u ah jiraalka. Hooyo waa barbaariyaha wax walba. Mar iyadaa barbaarisa dhasheeda, marna ubadkeeda ayaa huwaayeeya iyada oo hiil iyo hoo ba u fidiya, waa goorta ay gaboowdo e. Afkeennu inuu yahay HOOYO miyaan isku diideynaa?" maya xaashaaye. Haddaba BIDHAAMIYE waa dhigane ka faalloonaya afka hooyo, dhidibbo adag na dhulka ugu mudaya dhigaalka iyo higaadda Afkeenna HOOYO. Mar kale waa bare kuu geedqaadaya tubtii aad u mari lahayd Dhigaalka iyo Dhihitaanka afka Hooyo. Dhiganaha BIDHAAMIYE wuxuu ka kooban yahay (177 Bog) oo xajmiga warqaddiisu tahay (A5). Garbadkiisa/Jaldigiisu na adag yahay. Halkaas cilmiga ku jira ayaa ah inaan buugga aqrintiisa iyo baalal roggiisa ba lagu dul caajisin. "Cilmi la kor dhebay" Cutubyadiisu waa (5) Cutub, balse, cutub walba goonidiisa ayuu u leeyahay faraqyo badan oo cutubka guud farac ka ah. Waxa QorayFannaan, Hoobal, macallin, bare, aqoonyahan mase halaqoon, Barbaariye: Bashiir Ali Hussein Dhiganuhu waa hage, tuse, taxliiliye iyo bidhaamiye ku baraya qodobbo iyo qaaciddooyin meelaysan, kaliyase ku xiran inaad barato adigu. Cutub kasta waxa uu wataa tusaalooyin iyo sharraxaad ay ku laran tahay farshaxan luuqadeed oo aad u heer sareeya iyo laylis gaar ahaaneed oo cutubkii aad soo aqirsay kaa wayddiinaya waxaad kusoo aragtay. Taa soo akhristaha siinaysa ogaal iyo fiiro uu ku dhuuxo nuxurka uu buuggu gudbinayo. Intaas waxa kuu dheer suugaan ku saabsan waxa uu ka hadlayo cutubka aad soo martay, si muuqata oo mug leh na u tilmaameysa cutubka kaa dhamaaday iyo ujeedkiisa. Suugaanta uu cutub waliba ku iidaamay qoraagu asigaa curiyay. Qoraagu Cutubka ugu horreeya waxa uu ku billaabay tusaalooyin kaa kaalmeynaya inaad mugga hore barato, waxa ay yihiin, xuruufta afkeenna, kaa na kaalmeynaya in aad u kala barato shibbanayaal guud, kana kooban(21) labaatan iyo kow xaraf. Una kala baxa: (11) LIGANE (3) SIDKANE (7) SHIDANE. Goortaas ka dib ayuu haddana ku barayaa, Shaqalki oo ah xarakaad iyo iidaankii macaaneyn lahaa Xarfaha oomanaha ah ee aan kaligood shaqeyn karin. Intaas ka dib ayuu hortaada soo dhigayaaa "Shaqal u yaal" isla markiina wuxuu si kedis ah kuu wayddiinayaa waa maxaay "SHAQAL U YAAL?" adigu ba hore ka sheeg, maya waad hilmaantay e, hadda qoro. Shaqal u yaal waxa la yiraahdaa; (WA'DA iyo YA'DA). Maxaa caddeyn u ah? Sida uu qabo xeer qoraalka Af-Soomaaligu ma jiraan laba oomane ama shibbane oo sadar ama weer/weedh ama eray ku dhammaada sida:(KK…MM)Ama guud ahaanba 21 da xaraf ee shibbayaasha ah. Wayse dhacdaa mararka qaarkood, kolkaas oo labada shibbane midka hore uu noqonayoSHAQAL U YAAL. Haddana mar walbo waynu qornaa innagoon sababta garaneyn. Haddaba qoraagu wuxuu ku siinayaa tusaalooyin cad cad ee si fiican u dhugo.
Buuggu wuxuu tilmaamay in intaas iyo in kale oo ka sii badan erayada laba shibbane oo marti ahi ay soo gunaanadaan dhammaadka erayga. Ogow xeer ahaan, waa ma dhacdo in ay laba shibbane eray ku soo af xirmaan, hasa yeeshee marka aad aragto labada xaraf ee kala ah " W iyo Y” oo lammaan ku ah xaraf kale oo ku soo wada ururaya eray dhammaadkiis u garo, in ay yihiin "SHAQAL U YAAL”
BIDHAANTA: fal amar oo aan toos aheyn, Far-fiiqid la dheddigeeyay. Raalli ka noqo, haddii aan kugu daaliyay wax aad ogtahay, kaliya waxay iga ahayd xasuusin. Wax walbana waxay xaq u leeyihiin inay magac helaan/yeeshaan. Sida buuggaba loogu magac dhebay "BIDHAAMIYE”
Hadda ba BIDHAAMIYEwaa tilmaamid, sheegid, tusid, wax aadan ogayn oo meel lagaaga baytinayo si aad u garato. Tusaale: Awr geel ayaa kaa dibbooday ama kaa lumay. Adigoo raadinaya ama goobaya, ayaa qof kaaga horyimid dariiqa, is waraysi ka dib ayaad ku tiri; Awrka nuucaas ah ayaa iga lumay ee amaad aragtay bidhaantiisa? Kolkaasuu ku yiri: waa kan jooga meel hebel ee ka doono kobtaas. Hadda ba BIDHAAMIYE waa BIDHAAN afeed meel aan kuu dheereyn lagaaga baytinayo, haddii aad tahay qof doonaya aqoon ku saabsan afkiisa. Ha hilmaamin murtidii oranaysay "Intaad afkaaga ka barato ayaad af qalaad ka baran kartaa” aqoon iyo cilmi aan Afkaagu ku siin ha sugin inaad Af Islaameed ka hesho. Qur’aanka ba Af-Soomaali ayaa lagugu baray. Ha igu diidin waa kii Caalimki waynaaSheekh Yuusuf Al-kowneyn (AUN) uu kuugu higaadiyay:
"Alif la kordhebeey
Haddii aan Qur’aanka laguu gu iidaamin afkaaga, barashadiisa oo waajib ah ayaa kugu adkaan lahayd. Haddaba Bidhaamiye waa tilmaantaas bulsho qofkii hela ayaa se nasiib leh; "Inaad arrin mudan ummadduna u baahan tahay daaha ka rogto waa waajib cilmiyeed ku saaran, in la qaato se ma ahan wax adiga kuu yaal” Allow Bidhaamiye ma bidhaamiyay!!
Suugaanyahannada Soomaaliyeed maxay ku tilmaameen "BIDHAAMIYE?”
Kugu badin maayo e, dhowr halabuur waxay ka yiraahdeen ayaan soo qaadanayaa. Hees waxa jirta magaceeda dhanba la yiraahdo: "Bidhaan” miraha heesta waxa ka mid ah;
Laashin:Garaad Nuur Xuseen Maxamuudwuxuu ku tilmaamay sidaan;
•Baki iyo ilaa Booramiyo Saylac baraheeda
• CaluulaanBIDHAANsaday Qardhaan maray barkeediiye
• Garoowoo barbaartii degtiyo EylBIDHAANSADAYE
Abwaan:Cabdiraxiim H. Galayrasna wuxuu ku tilmaamay sida tan:
AfartaaBIDHAANii baxdiyo barashadaydii dheh
 Bilaash looma xayteeBIDHAANquruxsan maw yeelay
oBoqoraddaan ku faaniyo
o Waxad tahayBIDHAAMIYE
Waa Silsillad Aduunkuye
 Saban baadBADHAAMIYE.
Hees uu qaadayXasan Aadan Samatarayaa waxa ka mid ahaa:
Barxaddii hal doorkiyo
 "Baaraan deg nololeed
Xilligaas iyo muddadaa qarsoon ama dahsoon ee aan lahayn baaq tilmaameed aad ku garato billaawgooda iyo weliba dhammaadkoodaba, una dhaxeysa dhalashadaada ilaa iyo dhimashadaada, waxaa lagaaga baahan yahay dadaal iyo howl aqooneed aad u adag oo kugu sii haga wadiiqada toosan ee anfaca leh, taas oo jidka loo sii maraahi uu yahay oo keliya "Hufnaan anshax leh, daacadnimo, dulqaad iyo deggani leh iyo dadaal adkaysi leh oo bajiino iyo nasahaba looga maarmay”.
Haddaba, tala bixinta, aniga iyo inta igu aragtida ahba la quman ee aan soo jeedinayaahi, waxa ay tahay, in aad raacdo oo aad ka sahaay qaadato xigmadda oranaysa "Inta aad yar tahay foolka ka dhidid, inta aad adoo lixdan jir ah dhabarka ka dhididi lahayd.” Taas oo ay micnaheedu tahay: "Inta aadan xilqaad noqon xaraf barasho u hub qaad, si aanay dantu kuu badin muruq maalnimo iyo dhabar ku xoogsi kaliya, adiga oo waayeel ah xilli dambe oo ay noloshaada awood yari iyo gabow isu kaashadeen!”
 "Xilligu wuu ordayaa
Haddaba ogsoonow in howl aad qabato, ay ugu wanaagsan tahay in aad ahaato laba uun midkood "mid wax bara ama wax barta” qoraagu markuu halkaa marinayo fataq ma kugu soo yiri: "Xaddiiskii saxiixa ahaa ee laga soo weriyaySuubbanaheenna Muxammad binu Cabdullaahi Binu Cabdi Muddalib (SCW) ee ahaa:
"خيركم من تعلم القرآن وعلمه”
"Waxa idiin ku kheyr badan kan cilmiga barta dadkana bara”.
• "Farriinta dhegaha u furo
BIDHAAMIYE. Waa dhigane wax barasho ee waxan soo jeedin lahaa in lagu daro manhajka wax barasho ee Ummadda Soomaaliyeed. Qoraagu waxa uu qabtay oo uu kaligiis dhabarka u ritay inuu buuxiyo booskii ay lahayd wasaaradda wax barashada ee dowladda Soomaaliya iyo guud ahaan maamullada ka jira waddankeenna. Dhanka kale waa dhigane uu u baahan yahay qofkii doonaya inuu bulshada Soomaaliyeed la wadaago qoraal tayaysan oo tiirar adag ku taagan. Ma ahan buug curis ah oo la iska mala awaalay, balse, waa buug kasoo maaxday maskax waaya badan bare soo ahayd. Farriinta ugu dambeyaa ee aan dirayo ayaa ah:- "Aqoon la’aani waa iftiin la’aan” ee dhiganaha BIDHAAMIYE ha u daymo la’aannin. Waxan kusoo xirayaa BAALALROGIDDA BIDHAAMIYE gabay uu tiriyaylaashin: Hassan Abukar Alasow"Abaaji” oo aan is leeyahay isla buugga iyo aqoonta ku aasan ayuu ba ogaa laashinku, waxa uu yiri:
•Abbaar socod hayaan dheer ninkii, Aada meel durugsan